လုံခြုံရေး အချက်ပေးစနစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
လုံခြုံရေး အချက်ပေးစနစ် သည် အဆောက်အဦးသို့မဟုတ် နေရာ တစ်ခုခုသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း သို့ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ဝင်ရောက်ခြင်းကို စောင့်ကြည့်ရန် စီမံပြုလုပ်ထားသည့် ကိရိယာ ဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေး အချက်ပေးစနစ်များကို အိမ်များ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများ၊ စက်ရုံများ နှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများတွင် ခိုးမှု၊ ဖျက်ဆီးမှု နှင့် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူများမှ ရန်ပြုမှုတို့ကို ကာကွယ်ရန် အတွက် အသုံးပြုကြသည်။ လုံခြုံရေး အချက်ပေးစနစ်များကို လူနေအိမ်များတွင် တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ခိုးမှုများ လျော့နည်းသွားသည်ကို တွေ့ရသည်။ မော်တော်ယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်သော အချက်ပေးစနစ်များသည် ကားများနှင့် အတွင်းရှိ ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ထောင်များတွင်လည်း အကျဉ်းသားများကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် လုံခြုံရေး စနစ်များကို တပ်ဆင်ထားလေ့ ရှိသည်။
အိမ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ကြိုးမဲ လုံခြုံရေး အချက်ပေးစနစ်
အချို့သော အချက်ပေးစနစ်များမှာ သူခိုးရန်မှ ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုတည်းဖြင့် တပ်ဆင်လေ့ ရှိသော်လည်း စုပေါင်းစနစ်များတွင် မီးဘေး နှင့် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှု နှစ်ခုစလုံးကို ကာကွယ်ရန် အတွက် တပ်ဆင်လေ့ ရှိသည်။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှု အချက်ပေးစနစ်များကို လုံခြုံရေး ကင်မရာ များနှင့် ပေါင်းစပ်၍ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူ၏ လုပ်ဆောက်ချက်များကို ရိုက်ကူးသိမ်းဆည်းထားလေ့ ရှိသကဲ့သို့ အီလက်ထရွန်းနစ် သော့ခလောက်များဖြင့် အပိတ်အဖွင့် ပြုလုပ်သော အဝင်အထွက် ထိန်းချုပ်စနစ် နှင့်လည်း ဆက်စပ်ထားလေ့ ရှိသည်။ ထိုစနစ်များတွင် မိမိဘာသာ အသံမြည်သော အသေးစား စနစ်များမှ စ၍ ရှုပ်ထွေး၍ ကွန်ပျူတာဖြင့် စောင့်ကြည့် ထိန်းချုပ်သော စနစ်များ အထိ အမျိုးမျိုး အစားစား ရှိသည်။ လုံခြုံရေး ခလုတ်ခုံ နှင့် စောင့်ကြည့်ခန်း တို့ကြား အသံဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်သော စနစ်ပင် ပါဝင်တတ်သည်။
၂ အာရုံခံကိရိယာ အမျိုးအစားများ
၂.၁ လေလုံအောင်ပိတ်ထားသည့် ရိဒ်ဆွစ်ချ်များ
၂.၂ သွယ်ဝိုက် အနီအောက်ရောင်ခြည် ထောက်လှမ်းကိရိယာ
၂.၃ အင်ဖရာဆောင်း ထောက်လှမ်းကိရိယာ
၂.၄ အာထရာဆောင်း ထောက်လှမ်းကိရိယာ
၂.၅ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ထောက်လှမ်းကိရိယာ
၂.၆ ထောက်လှမ်းရေး ရေဒါ အသေးစား
၂.၈ မှန်ကွဲမှု ထောက်လှမ်းကိရိယာ
၃ ကြိုးတပ်စနစ်၊ ကြိုးမဲ့စနစ် နှင့် ပေါင်းစပ်စနစ်များ
၄ အချက်ပေးမှု ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း
ပြင်ပတွင် တပ်ဆင်ထားသော ခေါင်းလောင်း သေတ္တာ
အဝင်လိုင်း အထွက်လိုင်းများ ပါဝင်သော အချက်ပေးစနစ်၏ CPU ဆားကစ်ပြား
အချက်ပေးစနစ်တွင် အခြေခံအားဖြင့် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူကို သိရှိနိုင်မည့် အာရုံခံကိရိယာ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခု ထက်ပို၍ ပါဝင်တတ်ပြီး ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကို ပြသမည့် အချက်ပေးကိရိယာ တစ်ခု ပါဝင်တတ်သည်။ သို့သော်လည်း ပုံမှန်အားဖြင့် ပုရဝဏ်အတွင်း တပ်ဆင်ထားသော လုံခြုံရေး အချက်ပေးစနစ်တွင် အောက်ပါ ကိရိယာများ ပါဝင်တတ်သည်။
ပုရဝဏ် ထိန်းချုပ် ယူနစ် (Premise Control Unit) သို့ အချက်ပေးထိန်းချုပ် ခလုတ်ခုံ (Alarm Control Panel) သို့ မဟုတ် ခလုတ်ခုံ (Panel) ။ ။ စနစ်၏ ဦးနှောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှ အာရုံခံကိရိယာများမှ ဝင်လာသော အချက်များကို ဖတ်ရှုသည်။ စနစ်ကို တပ်ဆင်ထားသည်/ဖြုတ်ထားသည် ဆိုသော အခြေအနေ မည်သို့ရှိမည်ကို ကြည့်မည်။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ကြောင်း အချက်ပေးမည်။ ယနေ့ခေတ် စနစ်များတွင် ၎င်းမှာ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ကွန်ပျူတာ ဆားကစ်ပြားများဖြစ်ပြီး သတ္တုအလုံပိတ်သေတ္တာ အတွင်း ပါဝါဆပ်ပလိုင်းနှင့် အတူ တည်ရှိသည်။
အာရုံခံကိရိယာ (Sensors)။ ။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သည်ကို ထောက်လှမ်းနိုင်မည့် ကိရိယာများ ဖြစ်သည်။ အာရုံခံကိရိယာများကို ကာကွယ်ထားသည့် နေရာ၏ ပတ်ပတ်လည်တွင် လည်းကောင်း၊ အတွင်းတွင် လည်းကောင်း၊ နှစ်နေရာ စလုံးတွင် လည်းကောင်း တပ်ဆင်လေ့ ရှိသည်။ အာရုံခံကိရိယာများသည် တံခါးများ နှင့် ပြတင်းပေါက်များ ပွင့်နေခြင်း ရှိမရှိ သို့မဟုတ် လူမရှိနေသည့် အတွင်းပိုင်းရှိ လှုပ်ရှားမှု၊ အသံ၊ တုန်ခါမှု နှင့် အခြားနှောင့်ယှက်မှု များ ရှိမရှိ အစရှိသည့် နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးကို သုံး၍ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူများအား ထောက်လှမ်းနိုင်သည်။
အချက်ပေးကိရိယာများ (Alerting Device)။ ။ ၎င်းသည် အချက်ပေးရန် အခြေအနေကို ညွှန်ပြသည်။ အများအားဖြင့် ထိုအရာများမှာ ခေါင်းလောင်းများ၊ ဥဩများ သို့ မှိတ်တုပ်မှိတ်တုပ်ပြသော မီးများ ဖြစ်ကြသည်။ အချက်ပေး ကိရိယာများတွင် အတွင်းရှိ လူများကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ကြောင်း အချက်ပေးခြင်းနှင့် သူခိုးအား ခြောက်လှန့်ခြင်း စသည့် ရည်ရွယ်ချက် နှစ်မျိုးဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ ထိုကိရိယာများကပင် အတွင်းရှိလူများအား မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးခိုးထွက်ခြင်း များကိုလည်း သတိပေးနိုင်သည်။
ကီးပက်များ (Keypad)။ ။ သေးငယ်သော ကိရိယာများဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် နံရံတွင် ကပ်ထားလေ့ရှိကာ စနစ်အတွက် လူနှင့်စက် ဆက်သွယ်ရန် ကိရိယာ အဖြစ် ထားလေ့ ရှိသည်။ ခလုတ်များ အပြင် ကီးပက်များတွင် အချက်ပြမီးများ၊ အက္ခရာကို ပြသသည့် အကွက်အသေးလေးများ သို့မဟုတ် နှစ်ခုစလုံး ပါဝင်လေ့ ရှိသည်။
အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မှုများ (Interconection) ၎င်းတွင် ထိန်းချုပ်ယူနစ်ဖြင့် တိုက်ရိုက် ကြိုးဆက်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် သီးခြားပါဝါဆပ်ပလိုင်းရှိသော ကိရိယာများမှ ကြိုးမဲ့စနစ်ကို သုံး၍ ဆက်သွယ်ခြင်း တို့ ပါဝင်သည်။
စနစ်သပ်သပ် အပြင် လုံခြုံရေး အချက်ပေးစနစ်များသည် အမြဲလိုလို စောင့်ကြည့်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားလေ့ ရှိသည်။ အချက်ပေးသည့် အချိန်တွင် ပုရဝဏ် ထိန်းချုပ် ယူနစ်မှ ဗဟိုစောင့်ကြည့်ခန်း သို့ ဆက်သွယ်လေ့ ရှိသည်။ ဗဟိုစောင့်ကြည့်ခန်းမှ အော်ပရေတာသည် ဆစ်ဂနယ်ကို ကြည့်ရှု၍ ပိုင်ရှင်အား ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ရဲအား အကြောင်းကြားခြင်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက လုံခြုံရေး အရာရှိများအား ခေါ်ယူခြင်း အစရှိသည်များကို လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည်။ ထိုဆစ်ဂနယ်များကို အချက်ပေးစနစ်အတွက် သီးသန့် သွယ်တန်းထားသည့်လိုင်း၊ တယ်လီဖုန်းလိုင်း သို့ အင်တာနက်လိုင်းများမှ ပို့လွှတ်လေ့ ရှိသည်။
လေလုံအောင်ပိတ်ထားသော ရိဒ်ဆွစ်ချ် များသည် အတွေ့ရများသော အပိုင်း ၂ ခု ပါသည့် အာရုံခံကိရိယာမျိုး ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်နည်းအားဖြင့် ဖြတ်ကူးနိုင်သော ရိဒ်ဆွစ်ချ် အမျိုးအစားများ ဖြစ်ကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် လျှပ်စစ်စီးနေသော (Normally Closed) ပတ်လမ်းများတွင် သံလိုက်ပါသော အပိုင်းသည် သံလိုက် မပါသော အပိုင်း အနီးသို့ ကပ်နေပါက လျှပ်စစ်စီးနေပြီး သံလိုက်ပါသော အပိုင်းသည် ကွာသွားပါက လျှပ်စစ်စီးမှု ရပ်တန့်သွားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် လျှပ်စစ် မစီးသော (Normally Open) ပတ်လမ်းများတွင် သံလိုက်ပါသော အပိုင်းသည် သံလိုက်မပါသော အပိုင်းအနီးသို့ ကပ်နေပါက လျှပ်စစ် စီးမှု ရပ်တန့်နေပြီး သံလိုက်ပါသော အပိုင်းကွာသွားပါက လျှပ်စစ် စ၍ စီးဆင်းသည်။ ထို လျှပ်စစ်စီးမှု မစီးမှုအား အချက်ပေးစနစ် ထိန်းချုပ်ခလုပ်ခုံ မှသိရှိခြင်းဖြင့် ဇုန်တစ်ခု သို့မဟုတ် ပတ်လမ်းတစ်ခုတွင် အချက်ပေးရန် အခြေအနေ ရှိမရှိကို သိရှိနိုင်သည်။ ထို အာရုံခံကိရိယာများကို နေရာ အနှံ့အပြားတွေ့ရပြီး အချက်ပေးခလုတ်ခုံ နှင့် ဝိုင်ယာကြိုးဖြင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားတတ်သည့် အခါရှိသလို ကြိုးမဲ့စနစ်သုံး၍ တံခါး နှင့် ပြတင်းတံခါးများတွင် တပ်ဆင်ကာ အခြေအနေကို ထောက်လှမ်းကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် လျှပ်စစ်စီးနေသော ပတ်လမ်း (Normally Closed) များကို အသုံးပြုခြင်း ပိုများလေ့ ရှိပြီး ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူမှ အာရုံခံကိရိယာနှင့် အချက်ပေးခလုတ်ခုံအကြား ချိတ်ဆက်ထားသော ကြိုးကို ဖြတ်တောက်လိုက်ပါကလည်း အချက်ပေးစနစ်မှ သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်သည်။
သွယ်ဝိုက် အနီအောက်ရောင်ခြည် ထောက်လှမ်းကိရိယာပြင်ဆင်
လှုပ်ရှားမှုကို ထောက်လှမ်းသိရှိနိုင်သော သွယ်ဝိုက်အနီအောက်ရောင်ခြည် အာရုံခံကိရိယာ
သွယ်ဝိုက် အနီအောက်ရောင်ခြည် (Passive Infrared သို့ PIR) လှုပ်ရှားမှု ထောက်လှမ်းကိရိယာမှာ အိမ်များနှင့် အရွယ်အစားသေးငယ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးများသော အာရုံခံကိရိယာ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဈေးနှုန်းအားဖြင့် သင့်တော်ပြီး စိတ်ချရသော ကိရိယာ အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ သွယ်ဝိုက် (passive) ဟု ခေါ်ဝေါ်ရခြင်းမှာ ထောက်လှမ်းကိရိယာမှ စွမ်းအင် ကို ထုတ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ထုတ်ခြင်း မရှိဘဲ အခြားသော အရာဝတ္ထုများမှ ထုတ်လွှတ်သော အပူစွမ်းအင်ကို ထောက်လှမ်းသိရှိခြင်း ဖြင့် အလုပ်လုပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အတိအကျ ပြောရမည်ဆိုလျှင် သွယ်ဝိုက်အနီအောက်ရောင်ခြည် အာရုံခံကိရိယာများသည် လှုပ်ရှားမှုကို ထောက်လှမ်းသိရှိခြင်း မဟုတ်ပေ။ အမှတ်တစ်ခု၌ အပူချိန် ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားသည်ကို ထောက်လှမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူသည် အာရုံခံကိရိယာ ရှေ့တွင် ဖြတ်လျှောက်မည်ဆိုပါက ထိုနေရာမှ အပူချိန်သည် အခန်း၏ အပူချိန်မှ လူကိုယ်ခန္ဓာ အပူချိန်သို့ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပြီးမှ ပြန်လည်၍ လျော့ကျသွားမည်။ ထိုသို့ အလျှင်အမြန် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ထောက်လှမ်းသိရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
သွယ်ဝိုက်အနီအောက်ရောင်ခြည် အာရုံခံကိရိယာများကို နံရံ သို့မဟုတ် မျက်နှာကြက်တွင် ကပ်၍ တပ်ဆင်ရန် ပြုလုပ်ထားလေ့ ရှိပြီး ထောက်လှမ်းသိရှိနိုင်သော နေရာ၏ ထောင့်အကျယ်အဝန်း အမျိုးမျိုးရှိ၍ ထောင့်ကျဉ်း အနေအထားမှာ ၃၆၀ ဒီဂရီ အထိ အမျိုးမျိုး ရှိသည်။ ထို အာရုံခံကိရိယာများတွင် ထောက်လှမ်းရန် ပတ်လမ်းအတွက်သာမက သီးသန့် ပါဝါ ပေးရန် လိုအပ်သည်။
ထောက်လှမ်းရေး ရေဒါ အသေးစားပြင်ဆင်
ကြိုးတပ်စနစ်၊ ကြိုးမဲ့စနစ် နှင့် ပေါင်းစပ်စနစ်များပြင်ဆင်
အချက်ပေးမှု ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းပြင်ဆင်
↑ Lee, Seungmug (2013-04-01). "Spatial impact of burglar alarms on the decline of residential burglary" (in en). Security Journal 26 (2): 180–198. doi:10.1057/sj.2012.8. ISSN 0955-1662.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လုံခြုံရေး_အချက်ပေးစနစ်&oldid=469331" မှ ရယူရန်
၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၁၁:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၁၁:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။